तिहारकै दिन दुर्घटना: बहिनीको मृत्यु, दाइ अस्पतालमा - Sero Fero News
सेराेफेराेन्यूज प्रकाशित मिती - २ मङ्सिर २०७७, मङ्गलवार
चाडबाडका दिन काममा जान मन त कसलाई हुन्छ र! जागिरे भएपछि नगई पनि नहुने, त्यसमा रेडियोको जागिर।
प्राविधिकविना रेडियो बज्दैन। रेडियो बन्द गर्नु पनि भएन। कोरोना महामारीका कारण झनै यसपालि अवस्था फरक छ। देउसी भैलो खेल्न पाइएन। गाउँघरमा रेडियोले भट्याएको सुनेरै देउसी भैलोको नियास्रो मेट्नु पर्ने अवस्था बन्यो।
त्यही जिम्मेवारी पुरा गर्न २२ वर्षीया मनिसा लामिछाने सोमबार ‘रेडियो हाम्रो पहुँच’को कार्यालय जाँदै थिइन्।
दाजु विराजलाई टीका लगाएपछि उनी रेडियोमा जान लागेकी थिइन्।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका-१९ बिजौरीको घरबाट बहिनीलाई रेडियोसम्म छोड्न विराजले मोटरसाइकल चलाए। सोमबार दिउँसो साढे १२ बज्दै थियो। उनीहरू रेडियो जान चोकबाट घुम्दै थिए। तुलसीपुर बजारबाट बत्तिएर आएको स्कार्पियोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दियो।
प्रहरीका अनुसार स्कार्पियो चालक १९ वर्षका थिए। प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार तीव्र गतिका कारण दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। ठक्कर दिने चालकसहित स्कार्पियो प्रहरी नियन्त्रणमा लिइएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख डिएसपी शिवबहादुर सिंहले जानकारी दिए। क्षतिपुर्तिबारे मंगलबार बिहान इप्रका तुलसीपुरमा छलफल भएको सिंहले बताए।
बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नं. १ सौंरी कुसुमका ६२ वर्षीय दिलबहादुर लुङगेली मगर साइकलबाट घर फर्किँदै थिए।
उनी नजिकै बजारबाट तिहारको लागि ओखर किन्न बजार गएका थिए।
झिसमिसे साँझ परेको थियो। पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा साइकल चलाइरहेका उनलाई पूर्ववाट बत्तिएर आएको बा १२ च ३६२४ नम्बरको स्कार्पियोले ठक्कर दियो। उनी भुइँमा लडे। ओखर बाटोभरि छरिए। स्थानीयले उद्धार गरी कोहलपुर मेडिकल कलेज पुर्‍याएका दिलबहादुरलाई लगत्तै चिकित्सकले मृत घोषणा गरे।
ठक्कर दिएर भागेको उक्त स्कार्पियो र चालकलाई प्रहरीले अगैयावाट नियन्त्रणमा लिएको इलाका प्रहरी कार्यालय कुसुमका प्रमुख सई लक्ष्मण डाँगीले बताए।
मृत्युको खबर सौंरी गाउँमा एकै छिनमा फैलियो। चाड मनाउन तयारीमा रहेको गाउँ शोकमा डुब्यो। उनी घाइते हुँनासाथ गाउँका १५ जना जति अस्पताल दौडिए। मगरको शब मंगलवार बिहानसम्म कोहलपुर अस्पतालमै छ। सौंरीका पत्रकार अर्जुन वलीका अनुसार गाउँका अधिकांशले तिहारको टीका लगाउन पाएनन्।
तीन दिनदेखि उनीहरू सबै अस्पतालमै छन्। क्षतिपुर्तिको कुरा मिलेको छैन। दिलबहादुरका एक छोरा नेपाली सेनाका जागिरे र अर्का रोजगारीका सिलसिलामा विदेशमा छन्।
दिलबहादुर छोराहरू छुट्टिएकाले एक्लै बस्दै आएका थिए। ९२ वर्षीया आमा, ८० वर्षीया सासु आमा र पत्नीको सहारा दिलबहादुर नै थिए, उनको मृत्युले गाउँ शोकमा डुबेको छ।
चाडबाडमा सार्वजनिक सवारी साधन कम चल्छन्। यसपालि कोरोना भाइरसकेका महामारीका कारण सार्वजनिकभन्दा निजी सवारी साधन चढ्ने खोज्ने धेरै छन्। तर तीव्र गतिमा कुदाइने स्कार्पियोलगायत निजी सवारी साधनले गर्दा दुर्घटना बढेको छ।
स्कार्पियो चलाउनेहरू आलाकाँचा उमेरका हुनु र प्रहरीले पनि कडाइका साथ चेकिङ नगर्नाले दुर्घटनाको जोखिम बढेको प्रहरी अधिकारीहरू नै बताउँछन्।
‘स्कार्पियोहरूलाई त्यति चेक पनि हुँदैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘चेकिङमा कुनै कैफियत देखिए पनि मेरो मान्छे हो छोडिदेऊ भनेर ठूला बडाको फोन आउँछ। त्यसले गर्दा पनि उनीहरू मात्तिएका हुन।’ सेताेपाटीबाट साभार